चरासँगको युद्धमा सेना पराजित ! - सुनाखरी न्युज
चरासँगको युद्धमा सेना पराजित !
Posted on: September 25, 2020 - 4:40 pm
इतिहासमा विभिन्न देश, ठाउँ तथा समुदायका मानिस–मानिस भएका अनेक खालका युद्धहरुका बारेमा त हामीले सुनेकै छौँ । तर दुनियामा एउटा यस्तो युद्ध पनि भयो जहाँ मानिसहरु पक्षीसँग लडाइँ गरे । उक्त रोचक युद्ध सन् १९३२ मा भएको हो ।
सन् १९३२ नोभेम्बर २ तारखेको दिन थियो त्यो । सरकारी सेनाले इमुको झुण्डमाथि धावा बोल्यो र सुरुमा इमु भगाउने प्रयास गर्यो तर असमर्थ भए । त्यसपछि उनीहरुले एकठाउँमा जम्मा भएका ५० वटा इमुको माथि मेसिन गनले आक्रमण गर्ने योजना बनाए । जब सेनाले आक्रमणका लागि बन्दुक तेर्साएका मात्र के थिए इमुको झुण्डले पत्तो पाइहाल्यो र तत्कालै कुँदेर जंगलभित्र अलप भयो ।
इमु विरुद्धको लडाइँमा असफल भएसँगै उक्त सैनिक टुकडीका प्रमुखले त्यतिबेला निकै रोचक टिप्पणी गरेका थिए । यदि आफूसँग हतियार चलाउन जान्ने इमुको एउटा डफ्फा हुन्थ्यो भने आफू विश्वका कुनै पनि सैन्यबलको सामना गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
इमुविरुद्धको उक्त असफल युद्धलाई ‘द ग्रेम इमु वार’का नामले चिनिन्छ ।